Obizwa nge-slay queen uzenzela imali ngodumo
ISIPHALAPHALA esibizwa ngeSlay Queen, uSithelo Shozi, siziphihle siconsa Izithombe: ZIGCINIWE
UBONAKALA ezinkundleni zokuxhumana egqoke econsa, aveze izithombe edla ezitolo zokudla eziphambili, izimpahla ezimba eqolo okubalwa kuzo oLouis Vuitton. Ingasaphathwa ke eyama-weave abizayo.
Le ntokazi ibizwa nge-slay queen ko-Instagram, Facebook, Twitter nakwezinye izinkundla.
Kodwa lesi siphalaphala, uSthelo Shozi, waseMhlanga, eThekwini, uthi yize leli gama abizwa ngalo kujwayeleke ukuthi kubizwe ngalo abaqome izinkinsela ezibanika imali eshisiwe, yena uyayisebenzela impilo entofontofo ayiphilayo.
Uphinde abeyinxusa lenkampani yezinwele iThe Hair Trader nezinye.
Le ntokazi ephinde ibe wuDJ, ithi yona ingowesifazane ozimele futhi osanda kwethweswa iziqu zePolitical Science e-UKZN.
“Anginankinga ngokubizwa ngeslay queen ngoba konke enginakho ngikusebenzele futhi ngisazokwenza izinto ezinkulu empilweni. Uma belokhu bengibiza nge-slay queen benemicabango yabo ehlukile kunalokhu engiyikho, indaba yabo leyo.
“Ngiqale ukusebenza ngenza unyaka wesibili enyuvesi ngoba bengingafuni ukuswela futhi ngine ngane ekumele ngiyinakekele,” kusho uSithelo.
Le ntokazi enabalandeli abangu-176 000 ku-instagram nabangaphezulu kuka-30 000 ku-twitter ithi udumo lwayilandela ayikaze izibone ingusaziwayo. Kodwa lolu dumo eyaluthola ezinkundleni zokuxhumana ithi yaluphendula ithuba lokuzakhela imali. Yasungula ibhizinisi lokumakethela izinkampani ezahlukene imisebenzi yazo.
“Ngangilokhu ngicelwa yizinkampani ukuthi ngizilekelele ngisebenzisa ikhasi lami ukuze imikhiqizo yazo ibonwe ngabanye abantu.
“Ngalokhu ngiyakhokhelwa. Kuwumsebenzi yikhona engithola ngakho imali,” kusho uSithelo.
Eqhuba uthe akuzona zonke izintokazi ezingama- slay queen eziqoma kakhulu noma ezithola izinto ngokusebenzisa ubulili bazo ukuze ziphumelele.
Le ntokazi inengane yomfana nayo eyisilomo ezinkundleni zokuxhumana futhi ibangwa yizinkampani ezahlukene ngenxa yokukhalipha kwayo.
UMakhosini “Baby Makhosini” Shozi (2) uphinde abe ngumkhangisi wengqephu.
Unabalandeli njengonina ezinkundleni zokuxhumana. Phambilini uke wasebenza nezinkampani eziningi ezinkulu kodwa uSithelo wathi ukuzivala kancane lezi zinkampani ngoba efuna ingane yakhe ingaxhaphazeki, ithole nethuba elanele lokuba yingane.
Yize uSithelo eqale ngoJulayi ukuba uDJ, kodwa usedlala nasezindaweni ezinkulu njalo ngezimpelasonto okubalwa naseYadini Lounge eMlaza.
Uma engekho matasa nomsebenzi usuke esenkonzweni nodadewabo nonina ongumfundisi.